EGWU NDI FULANI EJIDELA NDI EBỌNYỊ – hoo!haa!!
EGWU NDI FULANI EJIDELA NDI EBỌNYỊ
Ndi Ufuezerakụ nke Ugwulangwu n’okpuru ọchịchị ime obodo Ọhaọzara nke steeti Ebọnyị na-ebizi n’ime oke ịtụ egwụ, maka mbuso agha ndi nchị ehi Fulani.
Ndi Fulani a akpakọrọla obosara ala ebe ndi obodo a na-akọ ugbo ma; foro ntụtụ ha taa na ndi obodo ahụ ga akwụtara ha ụgwọ ụtụ isi.
Otu onye bi n’obodo ahụ gwara ndi nta akụkọ n’ụbọchị Faraidee gara aga, na ndi Fulani ahụ ekwuela hoohaa, na ha ga aba ndi obodo ahụ ọgụ belu sọ ma ha kwụtara ha ego dị naari puku naira abụọ n’ihi otu ehi ha merụrụ ahụ n’ụkwa ya.
Nwoke a nke ekweghị ikwu aha ya maka egwu, sịrị na ọtụtụ ndị obodo ahụ agbafuelarị n’ihi na nd nchị ehe a wakporo obodo ahụ nwa mgbe nta gara aga, were na-aga site n’ezinụlọ rue ezinụlọ ma na-agwa ha na ha ga-ebuso ha agha maka naanị otu ehi ha emerụrụ ahụ.
Nwoke a sịrị na ha na-ebi n’egwu kịta maka na ha amaghị mgbe ọ ga-abụ. Ọ sịrị na mgbe ndi Fulanị ahụ na-agaghrị na eyi ha egwu, na ha sịrị na ha na-ama ndi obodo ahụ imi n’ọbụ ha merụrụ otu ehi ha ahụ ahụ n’ụkwụ.
Ọ sịrị na ndi Fulanị gwara ha na ha ga-achụpụ ndi obodo ahụ kpam kpam, ma ha-akwụtaghị ụgwọ a maka ọkpa ehi ahụ.
Nwoke a sịrị na ka ihe si kwụrụ kịta, na ndi obodo ahụ amalitela ichụ nta ego maka ịkwụ ụgwọ ọkpa ehi ahụ, o kwuru na ha enwetala otu naarị puku na puku naarị naira iri ise maka nke a.
Onye ọzọ gwakwara ndi nta akụkọ okwu gbasara ndi Fulani a, kwuru na obodo ha na-amasị ndi Fulani ịkpa ehi ha maka na ha nwere ezigbo ọhịa dị mma ebe ahụ, dịkwazi n’akụkụ ugwu.
Ọ sịrị na ndi Fulani ewerela aka ha keriere onwe ha ebe ha na-akọbu ugbo ma na-ahazi ọchịchị ebe ahụ ka o si dị ha mma. N’okwu ya onweghịzị onye na-agaru ebe ugbo ha ahụ nso, ọbụladị maka ịga gbutere ewu na atụrụ nke ha ahịhịa ha ga-ata.
Ọ sị na nke ka njọ kịta bụ na ndi Fulani ahụ ahapụla ebe ugbo ha, na-akpụdebezi nso n’ebe obibi ha. Ọ gara n’ihu kwue na ha emerela ndi ọchịchị okpuru ime obodo ha mkpesa mana ha anaghị emegharị ahụ.
Ndi obodo ahụ na-arịọ gọọmenti etiti nakwa nke steeti ha ka ha mee ngwa gbatara ha ọsọ nchekwa n’ihi na yabụ miri na-eruzị ha n’akpịrị.
Previous Post: ARỤ NA-EME, LEKWANỤ ONYE CHỌRỌ ILI NNE YA NA NDỤ!!!
Next Post: EGBE/EGBE